စူပါမားကတ်ကြီးဆိုပြီး စိတ်မချလိုက်နဲ့ (သို့) ရက်လွန်ပစ္စည်း သတိပြု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စူပါမားကတ်ကြီးဆိုပြီး စိတ်မချလိုက်နဲ့ (သို့) ရက်လွန်ပစ္စည်း သတိပြု
စူပါမားကတ်ကြီးဆိုပြီး စိတ်မချလိုက်နဲ့ (သို့) ရက်လွန်ပစ္စည်း သတိပြု
Posted by panpan on Aug 4, 2011 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Society & Lifestyle | 29 comments
Exp: date ရက်လွန် ရှားလို့သုံးတာပါ
အဲဒါကြောင့် ပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့ မပြောဖြစ်တာ ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီ
ဒါကလည်း မပြောရင် တခြားလူတွေ သတိမထားမိဘဲ ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ပါ
အကြောင်းကတော့ ဒိတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ စူပါမားကတ်မှာ ရောင်းချတာတွေလို့ပါပဲ
ကျွန်မ ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတဲ့ စူပါမားကတ်တစ်ခု(အမည်တော့ ဖော်မပြတော့ပါ)မှာ ဈေးသွားဝယ်တာ
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဆို ထားတော့၊ ခုဟာက စားသောက်ကုန်တွေပါ
အဲ…..အဲဒီမှာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်း ရက်လွန်တာတွေ ရောင်းတယ်နော်
အရင်တခေါက်သွားတုန်းက ကိတ်မုန့်ဝယ်တာ ကိတ်မုန့်ဗူးတစ်ဗူးကမုန့်က မှိုတက်နေတာတွေ့ရတယ်
ဒါနဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ဒီကိတ်မုန့်က ရက်လွန်နေပြီ မှိုတောင်တက်နေပြီလို့ ပြောပြီးသိမ်းခိုင်းလိုက်တယ်
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်ပြီး ဈေးဝယ်ဖြစ်တယ်
(ပစ္စည်းတွေအဆင်မပြေပေမယ့် အဲဒီမှာပဲဝယ်ဖြစ်တာက သွားရတာနီးနေလို့ )
အဲဒီတစ်ခါကျတော့ သစ်သီးစုံဗူးလေးတွေနားမှာ ကြည့်နေတာ၊
ပုလင်းပုပုလေးနဲ့ အ၀ါရောင်ဖျော်ရည်ပုလင်းလေးတွေတွေ့တော့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်မိတယ်
အဲဒါဘာလဲလို့၊ ပုလင်းမှာက ယိုးဒယားစာတွေချည်းပဲဆိုတော့ မဖတ်တတ်ဘူးလေ
သူကပြန်ပြောတယ် သရက်သီးဖျော်ရည်တဲ့၊ အနှစ်တဲ့
သဘောကျသွားတာပေါ့၊ ပုလင်းလေးကလည်း ဆန်းဆန်းလေး၊ သရက်သီးဖျော်ရည်အနှစ်ဆိုတော့၊ ၀ယ်မယ်ကွာဆိုပြီး ခြင်းထဲကိုထည့်ခါနီး
ပုလင်းအဖုံးက ဆေးတွေနည်းနည်းကွာပြီး သံအဖုံးမို့ သံချေးတောင်လိုက်နေပြီ
ဒါနဲ့ စင်ပေါ်ကတခြားပုလင်းတွေနဲ့ ပြန်လဲလိုက်တယ်
ထပ်ယူလိုက်တဲ့ပုလင်းကလည်း အဲလိုပဲ သံချေးတွေနဲ့ (ဒါကိုရက်လွန်နေမှန်းမသိသေးဘူး၊ “အ”တာ)
ဒါနဲ့ပဲ မသင်္ကာတာနဲ့ ရက်စွဲဖတ်လိုက်တော့ လား..လား….လပေါင်းများစွာ လွန်ခဲ့ပါရောလား
မကြည့်ဘဲဝယ်သောက်လိုက်လို့ကတော့ မဖြစ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူး ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မလေးရှားမှာနေတဲ့ ကျွန်မအစ်ကိုရဲ့ သားလေးလည်း ရက်လွန်ဂျယ်လီစားပြီး နေမကောင်းဖြစ်သွားလို့
ကျွန်မကတော့ပြောလိုက်တယ်၊ မြန်မာမှာတော့ လူတော်တော်များများ(အခြေခံလူတန်းစားများ)
ဒါပေမယ့် ကျွန်မလည်းနောက်တော့ ရက်လွန်သွားရင်မစားတော့ဘူး၊ အခန့်မသင့်ရင် တစ်ခုခုဖြစ်မှာလေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စားသောက်ကုန်တွေမှာ ပြုလုပ်ရက်၊ ကုန်ဆုံးရက်တွေထည့်ရေးပေးရမယ်လို့ စကြေငြာပြီး
စတင်လုပ်ဆောင်ကာစတုန်းကပေါ့၊ ကျွန်မမရမ်းပြားအချဉ်ထုပ်လေးတစ်ထုပ်ဝယ်စားတယ်(အိမ်နားက အိမ်ဆိုင်လေးမှာပါ)
အိမ်ရောက်တော့ ရက်စွဲကြည့်လိုက်တော့ ရက်ကျော်နေပြီ၊ အထုပ်လည်းမဖောက်ရသေးတာနဲ့ ၀ယ်တဲ့ဆိုင်ပြန်သွားပြီး
အဲလိုပဲတဲ့၊ ရက်စွဲကြည့်လို့မမှန်ဘူးတဲ့၊ တံဆိပ်က ရိုက်ပြီးသားတွေဆိုတော့
ဒီတံဆိပ်နဲ့ ထည့်ဖြစ်သွားတာတဲ့၊ နောက်နေ့ရောက်မယ့်ဟာတွေလည်း ရက်စွဲပြောင်းရိုက်ထားတဲ့ စာရွက်အသစ်မဟုတ်ရင်
ကျွန်မတွေးမိတာက ကျွန်မအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံကလူတော်တော်များများဟာ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့
သုံးလို့ စားလို့ ကောင်းမယ် ရသေးတယ်ထင်ရင် မစွန့်ပစ်ကြပါဘူး
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံများကျတော့ ဥပမာ-လေယာဉ်ကပစ္စည်းတစ်ခု (Fokkerကုမ္ပဏီပဲထားပါတော့)က ၂နှစ်သက်တမ်းရှိရင်
အသုံးပြုဖို့နှစ်ပြည့်သွားရင် ကုမ္ပဏီက အဲဒီပစ္စည်းကို အသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့
ဒီမှာတော့ ကားတွေကိုလည်း ဖြစ်သလိုမောင်းနေတာ
ရုံးက အထက်အရာရှိဖော်ရိန်နာတစ်ယောက်ပြောဖူးတာလေးလည်း သွားသတိရမိတယ်
သူဘတ်စ်ကားမစီးဖူးလို့ စီးကြည့်မိတယ်တဲ့၊ ကားဒရိုင်ဘာက အရမ်းကားမောင်းကြမ်းလို့
သူ့မှာတလမ်းလုံး ကြောက်နေရပါတယ်တဲ့၊ နောက်ထပ်သူလန့်သွားတာက ဒရိုင်ဘာရှေ့က ဒိုင်ခွက်တွေအကုန်လုံး
ဇီးရိုးမှတ်မှာပဲရှိတယ်၊ ပျက်နေတယ်တဲ့၊ (သူက ဒရိုင်ဘာနောက်မှာ ရပ်နေတာပါ)
ဒိုင်ခွက်တွေလည်းပျက်နေတဲ့အထဲ အရမ်းအမောင်းကြမ်းတော့ သူနောက်ထပ်လုံးဝ ဘတ်စ်ကားမစီးတော့ဘူးတဲ့
တော်တော်ကြောက်သွားပုံရတယ်၊ ဒီကဟိုင်းလတ်ကားတွေမှာ တွဲလောင်းခိုလိုက်ရတဲ့လူတွေများ ဟောလီးဝုဒ်စတန့်မင်းသားထက်
မသာရင်သာရှိမယ်၊ စွန့်စားပုံတော့ မလျော့ဘူး (ဤကား စကားချပ်)
ရေးရင်းလမ်းလွဲကုန်ပြီ(ပရိုမဟုတ်တော့လည်း သည်းခံပါလို့ )၊ စူပါမားကတ်အကြောင်းလေး ပြန်ဆက်ကြစို့ရဲ့
ဒီကနေ့လည်း အဲဒီစူပါမားကတ် ထပ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်
ဒီတခါတော့ နပ်သွားပြီ၊ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ရက်စွဲလေးရေးထားတာ ရှာရတာအမော
ခုလည်း ပစ္စည်းတော်တော်များများ ရက်လွန်နေတာ ထပ်တွေ့ရတယ်
ကိုယ်တိုက်ကလည်း အရင်လိုမဟုတ်ဘဲ သေချာသတိထားကြည့်တာကိုး
ဘီစကစ်မုန့်ထုပ်အချို့နဲ့ ကော်ဖီမိတ်(ခရင်မာ)ထုပ်အချို့ ရက်လွန်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်
အဆိုးဆုံးကတော့ ဘီစကစ်ထုပ်ပေါ့၊ တံဆိပ်တော်တော်များများ ရက်လွန်နေတော့ ၀ယ်စရာတောင်သိပ်မရှိတော့ဘူး
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ၀န်ထမ်းတွေခေါ်ပြီး ဒီပစ္စည်းတွေက ရက်လွန်နေပြီလို့ ပြောရအောင်လည်း ပစ္စည်းတော်တော်များများက ဒီတိုင်း
သူတို့ကလည်း သိရက်နဲ့ ရောင်းနေတာလားလည်းမသိ၊ ကိုယ့်ဆိုင်ပစ္စည်း ရက်လွန်မှန်းတော့
သိကြမှာပါနော်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာနေမှာ၊ သူဌေးကလည်း ရောင်းခိုင်းတာနေမှာပေ့ါလေ၊ ဒါကလည်း တစ်ကြောင်း
ရက်စွဲမကြည့်မိသူတွေ၊ မသိတဲ့လူတွေများ ၀ယ်မိရင် စားသုံးမိရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးမိကြလားမသိပါဘူး
မဖြစ်သေးလို့ပဲ မသိမိကြတာလား၊ ဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်း ပြီးပြီးရော နေလိုက်ကြလို့လား
သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ထင်ရပေမယ့် သေချာတွေးရင် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်
အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့ မှိုတက်တာလို မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာဆိုရင် ရှောင်မိပါလိမ့်မယ်
မမြင်မိ၊ သတိမထားနိုင်လောက်တဲ့အရာမျိုးဆို ကျိန်းသေတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ် ထိမှာပါပဲ
ဒီလို ရက်လွန်ပစ္စည်း အစားအစာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးအဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မစွန့်ပစ်ဖြစ်ဘဲ
သုံးစွဲမိတာဟာ ပစ္စည်းရှားပါးမှုနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ် (ကျွန်မအထင်ပြောတာပါ)
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံအများစုမှာ ဒီလိုပဲ ကြုံတွေ့နေမယ်ထင်ပါတယ်
ရှားပါးတော့လည်းလေ….ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ဒါမသုံး ဒါမစားလို့ ကိုယ်ပဲငတ်မှာပေ့ါ၊ ဘယ်သူက အာမခံမှာလဲနော်
နှမြောတော့လည်း ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလေနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တာ တကယ်မသိဖြစ်သွားတယ်
အားလုံးလည်းပဲ ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေ တတ်နိုင်သလောက် မသုံးမိအောင် ဂရုပြုပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်
ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေကို မသုံးဘဲ အလွယ်တကူစွန့်ပစ်နိုင်အောင် ပေါများကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
u should mention that super market name for the sake of us.
ကဲ မပြောချင်လည်း ကျွန်တော်ပဲ ပြောမယ်။ ရွှေဂုံတိုင်ဆို Execl မို့လား။ မှားနေရင်ပြင်ပေးပေါ့။
ခုလို သတိပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆို သတိထားရတော့မှာပေါ့။ စူပါမားကက်တွေပေါ်လာတော့ အဝတ်အစား၊ အစားအသောက် အကုန်လုံးပဲ ဈေးမှားမှာ ပစ္စည်းမှားမှာ မစိုးရိမ်ရဘူးဆိုပြီး လွယ်လွယ်ပဲ ဝယ်သုံးနေတာ။
ဘကြီးပုရေ- အညာစောင်က အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့မရဘူး။ စူပါမားကက်မှာက ဘာပဲလိုလိုလေ။
ရက်လွန် ဆိုလို့.. ဆူး ရဲ့ ၂၁ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကိတ်မုန့်ကို ဒဂုံဆန်တာ မှာ ရှိတဲ့ စီဇင် ကိတ်မုန့် ဆိုင်က ကိတ်မုန့်တလုံးဝယ်ပြီး မိသားစုတွေနဲ့ ကိတ်မုန့်ခွဲတယ်။ ခွဲပြီးတော့ စားလိုက်တော့.. ကိတ်မုန့်က ချဉ်နေတယ်။ စိတ်သိပ်ဆိုးတာပဲ.. အချိန်မှီလေး အမြန် သွားလဲတယ်။ သူတို့ နှိုက်မြည်းပြီး မချဉ်းဘူး စွပ်ညင်းတယ်။ နောက်တော့ တယောက်က လာမြည်းပြီး ဟုတ်ပါတယ် ချဉ်ပါတယ် ဆိုပြီး ၀န်ခံသွားတော့မှ လဲပေးတယ်။ ကိုယ်ဝယ်တော့ အကြီး လဲဖို့ အဆင်သင့် ရှိတာ အသေး ဖြစ်နေတယ်။
စိတ်ကို ပျက်တာပဲ.. ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ နှစ် က တနှစ်လုံး စိတ်မကောင်းစရာ စိတ်ပျက်စရာတွေ ဆက်တိုက် ကြုံခဲ့တာပဲ.. တိုင်ဆိုင်တယ် ပြောရမလား အတိတ်နမိတ် မကောင်းတာလား တောင် မသိတော့ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှု ပြင်းထန်တဲ့ နှစ်တော့ ဖြစ်ခဲ့တာ အမှန်ပဲ။
မွေးနေ့မှာ ဥပုသ်စောင့်လိုက်ရင် ဘာမှတောင်မကုန်ဘူး
ကိတ်မုန့်ဒွေဘာဒွေနဲ့ ကဲခြင်တာကို မှတ်ထား
ပြည်တွင်းဖြစ် စားသောက်ကုန် ၊ ဆေးဝါး များ က အိတ်စပိုင်းယား ဒိတ် မြင်နိုင်လို့ တော်သေးတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်လောက် က ဂျာနယ်တွေ မှာ ရေးသလို ။ ဒီက စူပါမားကပ် ၊ ဟိုက်ပါ မားကပ် ပိုင်ရှင်များ ဟာ တရုတ် ၊ စင်ကာပူ ၊ ဘန်ကောက် အစရှိသဖြင့် နိုင်ငံ ပေါင်းစုံ က စူပါမားကပ် တွေ စတိုးဆိုင်တွေ ၊ ဒစ်စကောင့် ချ ချိန် ဆိုရင် ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားဝယ်ကြတယ် ဆိုပဲ ။ ဟိုကလူတွေ က ဘယ်လို ဒစ်စကောင့် ချတာလဲ ဆိုရင် ၊ စားသောက်ကုန် တွေ အိတ်စ်ပိုင်းယား ဒိတ် နီးလာပြီ ဆိုရင် ၅၀ % ကျော် အထိ ဒစ်စကောင့် ချရောင်းပါသတဲ့ ။ အဲဒါကို ဒီက ဘော့စ်တွေ က ပြေးဝယ် ၊ ဒိတ်တွေ ကို ဖျက်ပြီး ကိုယ့်ဆိုင် ၊ ကိုယ့် မားကပ် မှာ ခပ်တည်တည် နဲ့ပြန်ရောင်းပါသတဲ့ ။
အဲတာ ဟုတ်တယ် နွယ်ပင်ကတော့ ခဏခဏကြုံတယ်
တစ်ခါကလည်း စူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုကပဲ ယိုးဒယားကထုတ်တဲ့ မုန့်ခြောက်လေးဝယ်လာတာ
ဝယ်ပြီး စားခါနီးမှ သတိရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဒိတ်က ကုန်နေတာ 1 လလောက်ရှိနေပြီလေ
နောက်တစ်ခါကတော့ သူငယ်ချင်းကို လူကြုံလက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်လာတဲ့ ငါးပိထောင်းဘူးတွေထဲမှာ
2 ဗူးက ဒီတ်လွန်ကြီးဖြစ်နေတာ …
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဘာဝယ်ဝယ် ဒိတ်ကြည့်တာ အကျင့်တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ ….
ဆိုင်ပါ ထည့်တင်လိုက် ဒါမှ လူတွေ သတိထားမိမှာ
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ ဒီလိုကိစ္စဆို မီဒီယာထဲမှာအကျယ်တ၀င့်ပြသနာတွေဖြစ်ကြတာ
အ၀တ်အထည်၊ စားသောက်ကုန်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းအစုံ၊ အိတ်၊ ဖိနပ်၊ အလှကုန်၊ မီးဖိုချောင်သုံး အစုံရတယ်
အဲဒီကုန်တိုက်ကလည်း စီတီးမတ်လို လူသိပ်မစည်ကားတော့ သိပ်မရောင်းရဘူးလေ
ဒါကြောင့် ပစ္စည်းတွေက မကုန်တာလားမသိဘူး
ဒါပေမယ့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဆိုင်တွေမှာလိုက်ဖြန့်ရင် အရင်ဒိတ်ကုန်လက်ကျန်တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက ပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့ ကြားတယ်
တချို့ဆိုင်က ဆိုင်ရှင်တွေအပြောကတော့ ကုမ္ပဏီက ပြန်သိမ်းပြီး ဒိတ်ကိုပြင်ကပ်ပြီး ပြန်ဖြန့်တယ်ဆိုလားပဲ
နိုင်ငံခြားကသွင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကျတော့ ဘယ်လိုပြန်လဲမလဲနော်
ကျမတို့နားက စတိုးဆိုင်ကြီးကတော့ ဒိတ်လွန်မုန့်တွေကို အကြွေမရှိလို့ဆိုပြီး အမ်းတယ်၊ မသိတဲ့လူကျတော့ ယူသွားကြတာပေါ့၊ တစ်ရက်မှာတော့ ကျမ ညီမလေးက ဈေးသွားဝယ်တော့ အကြွေမရှိလို့ဆိုပြီး ဒိတ်လွန်မုန့်ကိုအမ်းပြီး အဲ့ဒီဆိုင်က အရောင်းကောင်မလေးတွေက 250 တန်ဝေဖာမုန့်ကို အကြွေမရှိလို့ 100 နဲ့အမ်းပေးတာလို့ပြောတယ်၊ ကျမညီမလေးကလည်း အရူံးခံပြီးတော့ ဘယ်သူမှ အမ်းမပေးဘူးတဲ့ မင်းတို့မုန့်တွေက ဒိတ်လွန်နေလို့ အဲ့လိုအမ်းတာ မယူဘူး၊ အကြွေးမရှိလဲ နောက်တစ်ခါ လာဝယ်တော့မှအမ်း၊ ထားခဲ့မယ်လို့ပြောမှ အကြွေအမ်းပေးတယ်တဲ့၊ တကယ်တော့ ဆိုင်တွေက မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်……….
အကြွေမအမ်းဘဲ ပစ္စည်းအမ်းတာတောင် သည်းခံနေတာပါနော်
သူ့မူရင်းတန်ဖိုးအတိုင်း ပစ္စည်းအကောင်းတစ်ခုခုအမ်းရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုပဲ
၂၅၀တန်ကို ၁၀၀နဲ့အမ်းတော့ တချို့ကတော့ယူမှာပေ့ါ
တကယ်က ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတာကြီး (စားမိရင် ရောဂါရဦးမယ်)
အလုပ်စားပွဲထဲက အချည်ထုပ်တွေ လဲရက်လွန်နေလား ကြည့်ပါအုံး အတေးရေး ရယ်…ဟိ။
ပြောလိုက်ပေါ့…ထမင်းစားချိန် သွားသွားနေတဲ့ တာဝါပါလို့…
အိတ်ပျော်နေရင်တောင်မှ ဆဲမိတဲ့ တာဝါ မို့လို့… အိတ်ဆဲ တာဝါပါ..လို့
အင်း ကြုံခဲ့ဖူးတယ် .. ။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ သေချာလေး သတိထားမိအောင် နောက်တခုပြောပြမယ်… ။ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ခြင်းတွေလည်း အဲ့လိုပဲ .. ပါကင်လောင်းပြီးသားဆိုတော့ .. ဘယ်သူမှ အတွင်းကပစ္စည်းကြည့်မနေတော့ဘူး .. ၀ယ်လိုက်တာပဲ .. နောက်ဆုံး လက်ဆောင်ရတဲ့ လူကမှ ဖွင့်ကြည့်တော့ရက်လွန်နေတာတွေ့ရော .. မကောင်းတတ်လို့ ပြန်မပြောပေမဲ့ .. အောင့်သီးအောင့်သက်နဲ့ .. ။
ဒါကြောင့်လည်း .. ကိုယ်တွေ လက်ဆောင်ခြင်း ၀ယ်တော့မယ်ဆို .. ခြင်းထဲက ပစ္စည်း ပြန်ဖောက်ကြည့်တယ်.. ပြီးမှ ခြင်းတောင်းကို ပြန်ပါကင်ထုတ်ခိုင်းတာ .. ပါကင်ခတော့ ကုန်မှာပေါ့ .. ။ ဒါပေမဲ့လည်း နည်းနည်းပါ.. ။ တစ်ခါက etoneဘဲရဲ့ … ဆရာကြီးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ခြင်းဝယ်ရော… ကိုယ်တိုင် မယ် တတ်ပ လုပ်ပြီး .. ပစ္စည်းတမျိုးစီဝယ် ၊ ခြင်း သက်သက်ဝယ်ပြီး ပါကင်ထုတ်တာ .. သေသပ်လွန်းလို့ .. အနူလက်သီးနဲ့ တူတယ်လို့ … အပြောခံလိုက်ရသေးတယ် .. စေတနာကို ပေတရာရောက်တယ် … အဲ့ဒါရက်လွန်ပစ္စည်းတွေကြောင့် !!!!
နောက်တခု စဉ်းစားတာ ရှိသေးတယ် … ။ နိုင်ငံခြား တံဆိတ်ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ကော်စမတ်တစ်တွေပါပဲ … ပုလင်း သေးသေးလေးကို … သောင်းနဲ့ ချီပေးရတာ .. တပုလင်းထဲဝယ်သုံးလို့မကောင်းဘူးလေ… ၀ယ်လျှင်တောင် သူနဲ့ လိုက်တဲ့.. တခြားအလှပြင် ပစ္စည်းလေးတွေလည်း ..၀ယ်ရတယ် … အဲ့ဒီအလှကုန်တွေ ၀ယ်တော့မယ်ဆို ထုတ်လုပ်တဲ့ ရက်စွဲကို ကြည့်ဝယ်ပါ…သူကတော့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရေးပဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲရေးထားတာများတယ် … ဒီတော့ ဘယ်တုန်းက ထုတ်တာလဲ.. အခုဆို သက်တမ်းဘယ်လောက်လဲ .. သေချာကြည့်ဝယ်ပါ … ၀ယ်ပြီးမှ ရင်နင့်နေရမဲ့အဖြစ်မျိုး မကြုံစေချင်လို့ပါပဲ ။
တစ်ခါတစ်လေ … ဖန်ဗူးပေါ်က ရက်စွဲလေးကို စပရစ်နဲ့ တို့ ဖျက်လျှင် ဖြစ်ဖြစ် ၊ တင်ဒါရည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖျက်လျှင် အသာယာလေးပဲ ပျက်သွားပါတယ် … ဒီတော့ .. ဒိတ်မပါတဲ့ ပစ္စည်းဆိုလည်း မ၀ယ်ပါနဲ့ … ။ သေချာလေး သတိထားရအောင် ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော် … ။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ
အလှကုန်တွေတော့ သောင်းကျော်တန်ကြီးတွေ မသုံးဖြစ်ပါဘူး
ဘာပဲပြောပြော ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေကို မလိမ့်တပတ်လုပ်ရောင်းတာတော့ မကောင်းဘူးပေ့ါ
ငါးစိမ်းသည် ငါးအပုပ်ကိုညာရောင်းတာ အလေးခိုးတာထက်ဆိုးတယ်
ရွာမှာ ဆို လက်ဆောင်ပေးခြင်လို့ရှိရင်
ခြံထည်းက ကြက်မတန်းတစ်ကောင်လောက် အရှင်ပေးလိုက်
ပြည်ပအားကိုး ပုစိန်ရိုးတွေ ရဲ့ ပြည်ပပစ္စည်းမှ အထင်ကြီးတာကိုး
နိုင်ငံခြား ဖောရိန်းမိတ် နိုးဘဲ
ငပိ = ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ် ( ခင်ဗျားတို့က ငပိတောင် ဘူနဲ့ထည့်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားငပိကိုစားတယ် )
ဥပမာ ပြောနေတဲ့ ဖျော်ရည်ဆိုတာ ရွာမှာ
သရက်သီးတစ်လုံး ဖရက်ရှ် တစ်လုံးကို ဒီတိုင်းစားပလိုက်တယ် ခုနကပြောတဲ့ ဖျော်ရည်ဘူးလောက်အာနိသင်ရှိတယ်
ခင်ဗျားတို့ ဂရုစိုက်ရမှာ ကြပ်ကြပ်သတိထားရမှာ ရာသီစာကို ရာသီချိန်မှာစားရမှာ
ကိတ်မုန့် = အောင်ပုတို့ရွာမှာ ဘိန်းမုန့်ဘဲစားတယ်
ကိုအောင်ပု ပြောမှ ဘိန်းမုန့်လေး စားချင်လိုက်တာနော်။
Excel Tower က V ……. ပဲဖြစ်မယ် ထင်တယ်
ဈေး၊ စူပါမားကတ်၊ ရှော့ပင်းမောလ်များတွင် ရက်လွန်နှင့် စားသုံးရန် မသင့်သည့် စားသောက်ကုန်များ ရောင်းချခြင်းကို တွေ့ရှိပါက မည်သူမဆို တိုင်ကြားနိုင်
ဈေး၊ စူပါမားကတ်များနှင့် ရှောပင်းမောလ်များတွင် ရက်လွန်နှင့်စားသုံးရန် မသင့်သည့် စားသောက်ကုန်များ ရောင်းချခြင်းကို တွေ့ရှိပါက မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး ချက်ချင်း အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဌာန၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရှိရသည်
အရေးယူရာတွင် ရောင်းချသည့် ဆိုင်၊ စူပါမားကတ်၊ ရှောပင်းမောလ်များ အပြင် အဆိုပါ စားသောက်ကုန်အား တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူများကိုပါ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”စားသုံးသူ အနေနဲ့ ရက်လွန်တွေနဲ့ စားသုံးဖို့ မသင့်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို တွေ့ရှိရင် ချက်ချင်း တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဈေးဆိုရင်လည်း ဈေးတာဝန်ခံ၊ ဈေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တိုင်ကြားနိုင်သလို စူပါမားကတ်တွေ ရှောပင်းစင်တာတွေ ဆိုရင်လည်း တာဝန်ရှိတဲ့သူကို ချက်ချင်း တိုင်ကြားလို့ ရပါတယ်။ FDA ကိုလည်း တိုင်ကြားလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ စားသုံးသူက တိုင်ကြားတဲ့အတိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို အရေးယူမယ်။ ပြီးရင် စားသုံးဖို့ မသင့်တာတွေကို တင်သွင်းတဲ့သူကို အရေးယူမယ်။ ပြည်တွင်းက ထုတ်လုပ်တာမျိုး ဆိုရင် ထုတ်လုပ်သူကို အရေးယူမယ်။ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းလာတာမျိုး ဆိုရင် ဒီလို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို နောက်ထပ် တင်သွင်းခွင့် မပြုတော့ဘူး”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန(FDA)မှ စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးများကို ဈေးကွက် ကောက်ယူစစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်လျက် ရှိသော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေဖြင့် သိရှိနိုင်ရန်မှာ စားသုံးသူများ၏ တွေ့ ရှိ အသိပေး တိုင်ကြားမှုမှာလည်း အရေးပါကြောင်း ပြည်တွင်း စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
စားသုံးသူက တိုင်ကြားတဲ့အတိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို အရေးယူမယ်။ ပြီးရင် စားသုံးဖို့ မသင့်တာတွေကို တင်သွင်းတဲ့သူကို အရေးယူမယ်။ ပြည်တွင်းက ထုတ်လုပ်တာမျိုး ဆိုရင် ထုတ်လုပ်သူကို အရေးယူမယ်။ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းလာတာမျိုး ဆိုရင် ဒီလို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို နောက်ထပ် တင်သွင်းခွင့် မပြုတော့ဘူး
”FDA အနေနဲ့ စားသောက်ကုန်နဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ဈေးကွက်ကောက်ပြီး အမြဲ စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တွေ့ရှိချက်မျိုးဆိုရင် ထုတ်ပြန်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ကောက် စစ်ဆေးပေးတာဖြစ်လို့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေရဲ့ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ စစ်ဆေးပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စားသုံးသူတွေဘက်ကလည်း ရက်လွန်တာတို့၊ စားသုံးဖို့ မသင့်တာတို့ကို တွေ့ရှိတဲ့အခါ ချက်ချင်း တိုင်ကြားကြဖို့ လိုပါတယ်” FDA မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆက်လက် ရှင်းပြခဲ့သည်။
”စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ ရှိနေဖို့ကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စားသုံးဖို့ သင့်၊ မသင့်ဆိုတဲ့အထိ မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တောင်မှ ရက်လွန် (Expire Date) တော့ ကြည့်တတ်ရပါမယ်။ စားသောက်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီးလို့ ဆိုင်ပေါ်တင် ရောင်းချတော့မယ် ဆိုရင်လည်း ထုတ်လုပ်သူတွေ အနေနဲ့ စတင် ထုတ်လုပ်တဲ့ ရက်စွဲနဲ့ သက်တမ်းကုန်လွန်မယ့်ရက်ကို စားသောက်ကုန် ပါကင်ပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်ပေးရတဲ့ စည်းကမ်းချက် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားသုံးသူတွေ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး အသေးအဖွဲတွေကအစ ကြည့်ပြီး ၀ယ်ယူကြမယ် ဆိုရင် ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုဘ၀ကို ရရှိကြမှာပါ။ ထုတ်လုပ်သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ စားသုံးသူရဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကို ဦးစားပေးရမှာပါ။ စားသောက်ကုန်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက စားသုံးသူကို ချက်ချင်းထိခိုက်စေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း ထိခိုက်တာပါ။ ဆိုးကျိုး ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး သုံးနေတာမျိုးတွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်”ဟု စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ဒီမှာက တစ်ခုခုဆိုပါးစပ်ပိတ်တဲ့လူတွေများနေတော့ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး
ကုန်ပစ္စည်းတွေ expired ဖြစ်တာထက် လူတွေ expired ဖြစ်နေတာကပိုဆိုးတယ်။ လူမြင်ကောင်းအောင်လို့ packing (uniform) ပြောင်းဝတ်ကြတယ်။
နယ်တွေက စူပါမားကတ်တွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ..။ ငါးအူချောင်းဆိုရင် ပုန်စော်တောင် နံနေပါပြီ ။ ဈေးလျှော့ရောင်းတာတဲ့ဗျာ..။